डेभिड विल्केसन। यदि तपाईं थकित हुनुहुन्छ ...
रोगहरू फरक छन्। तर तिनीहरू व्यावहारिक छन्। यो आत्माको घाँटीहरू निको पार्न धेरै गाह्रो छ। घृणात्मक लतको कीड़ाले आत्मालाई तेज पार्छ, अपराधको भित्रबाट निस्कन्छ, मनपर्ने एकको धोकाबाट, हृदय टुक्रा टुक्राउँछ। एक ईरिरी अवस्था। र यसको आफ्नै बलहरू सामना गर्न असम्भव छ।
ठीक छ, यदि त्यो क्षणमा हामीलाई अर्को व्यक्ति छ जब हामी समस्यामा पर्दछौं। तर ती साथीहरूसँग कस्तो साथी छैन? ती व्यक्तिहरूको प्राण जो कोहीलाई मायालु व्यक्ति छैन के हुन्छ, जुन एक कठिन घण्टामा मद्दत गर्नेछ? धेरैले आफ्नै सामना गर्न प्रयास गर्छन्। तर केही मानिसहरू प्रयास गर्न रोक्न। तथापि, त्यहाँ एक तरिका हो। अमेरिकन प्रचारक विल्केसनले आफ्ना उपदेशहरूलाई सधैंको बारेमा कुरा गर्छन् र सधैं सहयोग पुर्याउनेछ।
"कमजोर व्यक्तिहरूको परिवर्तन बलियो योद्धाहरूमा"
यो डेभिड विल्केर्सनका उपदेशहरूको एक नाम हो। उनको उपदेश प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई मदत चाहिन्छ जुन उनीहरूको समस्याबाट बाहिर निस्किरहेका छन्, तर यसलाई समाधान गर्न कुनै उपाय छैन। डेभीड विल्केर्सनले "आफ्नो हृदयको साथ" हरेक उपदेश पढे, उनले परमेश्वरको महान प्रेमबारे कुरा गरे। तथ्यहरू जुन मानिसहरू बीचमा पीडित धेरै सामान्य छ। र यो धेरै महत्त्वपूर्ण छैन कि एक व्यक्ति सही छ वा छैन कि छैन। एक मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि एक व्यक्ति एक्लै छैन।
त्यहाँ छ जो पीडा र दुखाइ हटाउन मदत गर्नेछ। यो एक व्यक्ति घातक जुनूनबाट टाढा हुँदा समर्थन गर्दछ, र निर्भरता विरुद्ध लडाइँ मार्फत पक्ष द्वारा हुनेछ। व्यभिचारी आदतले दाबी गर्ने व्यक्तिलाई दासत्वमा राख्ने व्यक्ति हो। तर त्यहाँ स्वतन्त्रताको लागि महत्वपूर्ण छ।
उहाँमाथि भरोसा राख्ने हाम्रो लागि। हरेक मानिस को लागि एक मूल्य हो। सबैलाई उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण छ, चाहे चाहे राम्रो हो वा खराब हो। उहाँले आफ्नो महान प्रेमको साथ सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, क्षमा दिनुहुन्छ, समर्थन र सही बाटो बिन्दु।
"परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आवाज जान्न चाहन्छ"
डेविड विल्केर्सनको प्रचारले येशूको दिमागी जीवनको नेतृत्व गर्न स्वतन्त्रता पाउनको लागी कल हो। आफ्नो शक्तिमा भरोसा नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस् र दासत्वमा निर्भर रहन नपाओस्, किनकि ख्रीष्टको सबैको साथमा योबाट मुक्त हुन सक्दछ। र एक कमजोर-दिमाग, कमजोर व्यक्तिबाट बलियो योद्धा बन्ने, बानीहरूको प्रतिरोध गर्न र अन्य मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सक्षम बनाइयो।
दाऊदका उपदेशहरूले सिद्धान्त शिक्षाहरू समावेश गर्दैनन्, तिनीहरू परमेश्वरका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरूमा आधारित छन्। सबैजनाको जीवनको लागि व्यावहारिक र प्रकाश मार्फत चल्ने र राम्रो हिंड्ने बाटो। दाऊद आफैले त्यही जीवन बिताउनुभएको थियो - उहाँले पछि लाग्नु भयो जहाँ परमेश्वरले उसलाई निर्देशन दिनुभयो। एक पटक उहाँले लाइफ म्यागजिनमा हेर्दा किशोरको हत्याको आरोपमा किशोरहरूको तस्बिर। यो कथाले उनलाई यति छोयो कि उनले न्यूयर्क जाने निर्णय गरे र यी केटाहरूलाई मदत गरे।
"क्रस र चाकू"
चार महिनाको लागि डेभिड विल्कर्सले सडकमा हिंडे र किशोरका, औषधी लत, किशोर अपराधी र तातो समूहमा प्रचार गरे। ब्रुकलिनमा अपराधीहरूको लागि उहाँले ठूलो बैठकहरू राख्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले दाऊदका उपदेशहरू हराएका किशोर र युवाहरूको हृदयमा छुनुभयो। एकपछि अर्को, तिनीहरूले ख्रीष्टलाई स्वीकार्छन्, बिस्तारै गिरोहलाई विनाश गर्न थाले।
सन् 1960 मा विल्कर्कसनले सेवकाईलाई "किशोरहरूको लागि ईसाईलोलवाद" बनाए। मैले एक दल भेला गरे। तिनीहरूले स्कूलमा शराब, औषधिको लतमा व्याख्यान चलाए र परमेश्वरको महान प्रेमलाई मदत गर्न प्रस्ताव गरे। जागरण सुरु भयो। किशोरका लागि पुनर्वास केन्द्र खोल्न थाले।
निर्भरताबाट स्वतन्त्रताको कार्यक्रम बाइबिलमा आधारित थियो। यहाँ सम्म कि राष्ट्रिय सरकारको संस्थानले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा मान्यता दिएको छ, र अमेरिकाका थुप्रै शहरहरूमा पुनर्वास केन्द्रहरू एक-एक खोल्न थाले। टेक्सास मा, वोल्ल चैलेंज को संगठन बनाइयो, जो कि एक किशोर बन्यो जो कि किशोरों संग काम गर्ने संगठनों को एकजुट गर्दछ। उनको राष्ट्रपति डेभिड विल्केर्सन थिए।
विल्कर्सले ती वर्षहरूको घटनाबारे पुस्तक लेखे "क्रस र चाकू।" पछि त्यही नामको चलचित्रलाई गोली मारियो।
डेभिड विल्केसन। भविष्यवाणी
विल्सेर्स 30 पुस्तकको लेखक हो। केवल केहि केहि रुसीमा अनुवाद गरिएको छ, "क्रस र चाकू", "यदि तपाईं थकित हुनुहुन्छ," "आवरणको साथ नयाँ नियम," "परमेश्वरको रक्षा योजना," "अमेरिकामा अन्तिम कल।" म विशेष गरी पुस्तक-भविष्यवाणीलाई मनपराउन चाहन्छु, डेभिड विल्केर्सन द्वारा लिखित लेख, "द विजन।"
पुस्तक संसारको भविष्यको बारेमा र घटनाको बारेमा दोस्रो आगमनको बारेमा बताइएको छ -5प्रहारहरूले अन्तिम पटकको बारेमा दाऊद डेविड विल्कसनलाई देखाउँछन्। विश्व आर्थिक आर्थिक संकट, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख भूकंप को बारे मा कुरा गर्छन। "तपाईंको मुखमा पाइप राख्नुहोस्!" - "विजन" पुस्तकको निरन्तरता।
उहाँको उपदेशहरूको ठूलो संख्या संसारका विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ। विल्सेर्स न्यूयर्क शहरको टाइम्स स्क्वायर चर्चको संस्थापक हो, जसको 8,000 सदस्यहरू छन्। चर्च 1987 मा स्थापित भएको थियो, र त्यसबेलादेखि विल्कर्सनले ईमानदारीपूर्वक प्रभुलाई सेवा गरेको छ, विश्वभर धेरै यात्रा गरे, यसले मसीही सम्मेलनमा भाग लिन थाल्यो।
विल्कसन मे 191919मा हम्मन्ड (इंदि।) शहरमा जन्मिएको थियो । बुबा, दादाभाइ र डेभिडको ठूला दादाले पक्कै पाएनन्। 8 वर्षको उमेरमा दाऊदले आत्माको बप्तिस्मा पाएका थिए (पेन्तिकोस्टल शिक्षा)। 14 विल्केर्सनको उमेरबाट उपदेश पढ्ने। सभाको महाविद्यालयमा एक धार्मिक शिक्षा प्राप्त भयो। 1952 मा उनी पादरी भए। उनले सन् 1953 मा विवाह गरे। तिनीहरूसँग चार जना बच्चा र 11 जना पोर्चुगलहरू छन्। सबै बच्चाहरु चर्चमा सेवा गर्छन्।
27 अप्रिल, 2011 मा डेभिड विल्केर्सन,7वर्षको उमेरमा कार दुर्घटनामा मृत्यु भयो। आफ्नो मृत्युको दिन उहाँले एक ब्लग प्रविष्टि प्रकाशित गर्नुभयो: "विश्वासलाई छिटो राख्नुहोस्। उहाँको वचनमा दृढ रहनुहोस्। संसारमा कुनै अन्य आशा छैन। "
मस्कोको म्याट्रनमा प्रार्थना
हज - यो के हो? हजको इतिहास
प्रयोगको लागि समीक्षा र निर्देशन: "Kardiovalen" खस्छ
Meringue केक - केही स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
यो lol के गर्छ। युवा र कम्प्युटर कठबोली
सधैंभरि चोट लाग्नु छैन ताकि घर मा, lashes हटाउन